Namastesansar | DSLR को फोटोलाई हुवावेको स्मार्टफोनबाट खिचेको भनेर झुटो प्रचार गरेको भेटियो ! - Namastesansar DSLR को फोटोलाई हुवावेको स्मार्टफोनबाट खिचेको भनेर झुटो प्रचार गरेको भेटियो ! - Namastesansar
होमपेज » ताजा समाचार » DSLR को फोटोलाई हुवावेको स्मार्टफोनबाट खिचेको भनेर झुटो प्रचार गरेको भेटियो !
उक्त तस्विर हुवावेको पी ४० प्रोबाट नभए निकनको D850 क्यामराबाट खिचिएको तस्विर हो । उक्त क्यामराको बजार मूल्य ३००० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ र पी ४० प्रोको क्यामराले उच्चस्तरीय DSLR को क्यामराको गुणस्तरलाई बराबर गर्न सक्दैन । तर पी ४० प्रोको क्यामरा नराम्रो भएको चाहिँ होइन । हाल उपलब्ध स्मार्टफोनहरू मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट क्यामरा भएको स्मार्टफोनमा हुवावेको पी ४० प्रो पनि पर्छ । कम्पनीले यस विषयमा माफी माग्दै एक विज्ञप्ति पनि प्रकाशन गरेको छ जस हुवावेले गल्ती स्वीकार गरेको छ । अहिले ओरिजिनल भिडियोलाई हटाइएको छ र नयाँ भिडियोमा “हुवावे स्मार्टफोनबाट खिचिएको” भन्ने लाइन प्रयोग गरिएको छैन ।